पूर्व सभासद इन्द्रमायाको जीवन संघर्ष |
पूर्व सभासद इन्द्रमायाको जीवन संघर्ष
स्नातकोत्तर गरेकी इन्द्रमाया हातखुट्टा टेकेरै स्कूल जान्थिन् ।
प्रकाशित मिति :2017-08-18 15:57:07
सुलिकोड गाउँपालिका–७ गोरखामा जन्मनुभएकी इन्द्रमाया गुरुङ शारीरिक रुपमा दुर्वल भएपनि निरन्तरको संघर्ष, मेहनत, लगाव र आत्मविश्वासले छुटै परिचय दिन सफल हुनुभएको छ । समयको फन्कोसंगै उहाँको परिचयमा थुप्रै विशेषण जोडिएका छन् । उहाँ पूर्व सभासद् तथा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपांग महिला संघकी महासचिवका साथै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी अपांग संघको महासचिवको पनि हुनुहुन्छ । जन्मेको दुई वर्षमै अपाङ्गता हुनुभएकी इन्द्रमायाले यस अवस्थामा आइपुग्न थुप्रै संघर्ष र चुनौतिको सामाना गर्नुप¥यो । उहाँको जीवन संघर्ष बारे महिला खबरका लागि खेमा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानी :
दुई वर्षको छँदादेखि अपाङ्गता भए !
आमाले भने अनुसार, म जन्मँदा राम्रै थिएँ । दुई वर्षको हुँदा ज्वरो आएको थियो रे । त्यसपछि मेरा दुवै खुट्टा नचल्ने भए । खुट्टा चल्न छाडेपछि धाँमीझाक्री लगाउनुभएछ तर सन्चो भएन । अहिले ह्विलचियरमा हिँड्छु । गाउँमा हुँदा त सपनाकै कुरा थियो ।
स्कुल जाँदा हेर्नेको भीड लाग्थ्यो
म अपांग भएपनि आमाबुबाले मलाई स्कुल पठाउनुभयो । मैले पनि पढाईलाई निरन्तरता दिए । एसएलसीसम्मको पढाई स्थानीय सूर्यज्योती माध्यमिक विद्यालय ताकुमा गरे । स्कूल घरदेखि एक घण्टा उकालो जानुपथ्र्यो । बाटोमा म हात र खुट्टा टेकेर जान्थें । दिनहूँ दुई घण्टा उकालो ओरालो गर्दा हात र खुट्टा लछारिएर घाउ नै घाउ हुन्थें । कहिले काहीँ त बाटोमा लड्थें पनि । यति समस्या हुँदा पनि मैले पढाई छोडिन । मेरो अवस्था देखेर मलाई हेर्नेको बाटोभरी भीड लाग्थ्यो ।
साँझ मात्र पिसाब फेर्नु पर्ने बाध्यता
अहिले त विद्यालय, बाटो, शौचालय अपांगतामैत्री छैन भने त्यतिबेला हुने कुरै भएन । त्यसैले म विद्यालय जानु अघि सधैँ पिसाब गरेर मात्रै निस्कन्थें । अनि घर फर्किर मात्र पिसाब फेर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पिसाब लागेपनि च्यापेरै बस्थे । पिसाब आउँछ भनेर पानी नै खादिनथें । यसैको असरले अहिले पत्थरी, पिसाब पोल्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखा परेको छ ।
खेल्ने र मेला जाने सपना मात्र
स्कुलमा साथीहरु खेलेको देख्दा एकदमै हौसिन्थें । तर, खुट्टै नहुँदा कसरी खेल्ने ? आफै चित्त बुझाउँथें । गाउँघरमा विभिन्न चार्डपर्वमा मेला लाग्थ्यो । हेर्न वा घुम्न जाने रहर सबै सपनामै सीमित हुन पुग्थ्यो ।
हातखुट्टा टेकेरै एसएलसीसम्म पढेँ
मलाई सधैँ पढेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना आउथ्यों । तर छरछिमेक र आफन्तको कुरा सुनेर केही गर्न सक्दैन की जस्तो पनि लाग्थ्यों । उनीहरु मलाई अपांगले के नै गर्ला र पढेर भन्थें । तर मैले हिक्मत हारिन । हातखुट्टाले टेकेरै एसएलसी पास गरे । त्यसपछि मैया प्रावि ग्याजी पढाउन थाले‌ । पढाइ छाडेको आठ वर्षपछि फेरी पढ्ने रहर जाग्यो । काठमाडौं आएर आरआर क्याम्पसमा भर्ना भएँ । सोही क्याम्पसबाट मैले राजनीतिशात्रमा मास्टर गरेँ ।
आमाबाबुको पाप फल म
समाज र आफन्तले मलाई मेरा आमाबुबाले पाप गरेकोले अपांग भएको भन्थें । मलाई प्रत्यक्ष नै भन्थे ‘तिमी तिम्रो आमाबाबुको पापको फल हौं ।’ त्यसबेला आमाबुबा र मैले प्रतिकार गर्न सक्दैनथ्यौ ।
जनवादी विवाह भयो
मलाई मेरो बिहे हुन्छ वा गर्छु भन्ने सोचेको पनि थिइन । मैले अपांगता भएका पुरुषले मात्र विवाह गरेको देखेको थिएँ । अपांगता भएका महिलालाई कसले बिहे गर्ला र भन्ने लाग्थ्यो । तर, नसोचेकै भयो । एक सबलाङ्ग व्यक्तिले मलाई बिहे गर्छु भन्नुभयो । सुरुमा विश्वास लागेन । तर, पछि उहाँसंग २०६५ सालमा जनवादी विवाह भयो । अहिले हाम्रो पाँच वर्षको छोरा छ । मलाई बच्चा नजन्माउन धेरैको दबाब आएको थियो । समाजमा अपांगता भएको व्यक्तिले जन्माएको सन्तान पनि अपांग र रोगी हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, हाम्रो बच्चा अहिलेसम्म राम्रो छ ।
२०५२ सालदेखि म राजनीतिमा चासो देखाउन थाले । मैया प्रावि ग्याजी पढाउदा त्यहाँ धेरैजसो कम्युनिष्ट विचारधाराका थिएँ । शिक्षकदेखि साथीहरु, आफन्तहरु पनि माओवादीमा लाग्नुभएको थियो । मलाई पनि पार्टीमा आउन र सहभागी हुन भन्थे । मेरो शारीरिक समस्याले पार्टीका कुनै क्रियाकलापमा सहभागी हुन सकीन । तर, जब म काठमाडौं आए त्यसपछि (२०६३ साल) माओवादीको भातृ संगठन अखिल नेपाल क्रान्तिकारी अपांग संघको स्थापना भयो । संघले अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ भनेपछि पार्टीले समानुपातिक सहभागिताको आधारमा मलाई सभाासद हुने अवसर दियोे ।
तर, दुरर्भाग्य २० बर्षपछि भएको एेतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचनमा अपांगता भएकाहरुले स्थान पाएनन् । ५० प्रतिशत महिला सहभागिता त भनियो तर, अपांगता भएका महिला पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएन । ऐनमा दलित वा अल्पसंख्यक भन्यो । त्यसमा पनि के मा उम्मेदवारी दिने प्रष्ट भएन । अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै संशोधन हालेका छौं ।
बहु–अपांगता भएका महिलाहरु बढी समस्यामा
अपांगता भएका व्यक्ति सबैको समस्या छन् । त्यसमा पनि बुहअपांगता भएका महिलाहरु झन् बढी नै समस्यामा छन् । उनीहरु महिनावारी हुँदा आफ्नो समस्या भन्न नसक्ने, आफैलाई स्याहार गर्न नसक्ने, बलाकृत हुने, घरमै बाँधेर राखिने र पाठेघर नै अप्रेसन गरी फाल्दिने जस्ता समस्याहरुबाट पीडित भइरहेका छन् । उनीहरुलाई यौन तथा प्रजनन् अधिकारबाट बञ्चित गरिदै आएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई आत्मबल आवश्यक
अपांगता भएका व्यक्ति घरभित्र बाँधिएर राखिएका छन् । उनीहरुलाई हक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । यस खाले समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई समाजमा सहज रुपमा धुलमिल दिन आवश्यक छ । उनीहरुलाई हौसला प्रदान गर्र्न, आत्मबल बढाउन र विभिन्न अवसरहरु प्रदान गर्न र समग्रमा उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न समाजले सकारात्मक भूमिका खेल्न आवश्यक छ । जसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्ति आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । उसले समाज र राष्ट्रका लागि पनि ठूलो योगदान दिन सक्छन् ।
विधेयकले अधिकार सुनिश्चित गरेको छ
अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धि बनेको विधेयक भर्खरै संसदले पारित गरेको छ । विधेयकले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अधिकार सुरक्षित गरेको छ । उनीहरुबाट जन्मने बच्चाहरुको शिक्षा र बच्चा हुर्काउने व्यक्तिलाई भत्ताको व्यवस्था, अपांगता भएका महिलालाई छोरा सरह सम्पतीमा समान हक हुने र अपांगता भएका महिलाको प्रजनन अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ । बहुअपांगता भएका व्यक्तिको पाठेघर फाल्न नपाउने व्यवस्था, महिला अपांगता भएकै कारण पुरुषले दोस्रो विवाह गर्ने नपाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । साथै राजनीतिक क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । यो सुशीको विषय हो ।
अधिकारको ग्यारेन्टी राज्यबाटै हुनुपर्छ
अपांगता भएका धेरै महिलाहरुलाई घरमै बाँधेर राख्ने र घर बाहिर निस्कन दिने गरेको छैन । समाज र घरपरिवारले उनीहरुलाई बोझका रुपमा लिने गरेका छन् । तर, राज्यले नै अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकार ग्यारेण्टी गरेमा उनीहरु समाज र घरपरिवारका लागि बोझ हुँदैनन् । उनीहरुलाई रोजगारको अवसर दिए, अरुमा निर्भर भएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । बौद्धिक अपांगता भएका महिलाका लागि छुट्टै पुर्नस्थापना गृहको स्थापना र राज्यबाटै हेरचाहको व्यवस्था हुनुपर्दछ । समग्रमा भन्नुपर्दा, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि शिक्षा, रोजगार, पुर्नस्थापना गृह, राजनीतिक अधिकारजस्ता कुराहरुको ग्यारेण्टी राज्यले नै गर्नुपर्छ ।